Alukhuni ama semi-finals e-Nedbank cup | News24
Alukhuni ama semi-finals e-Nedbank cup
AMATHIKITHI amasemi fayineli eNedbank Cup aseyatholakala ezikhungwini zamathikithi kuzwelonke. Kanti abathandi bebhola bayanxuswa ukuthi baqiniseke ukuthi bayawathenga amathikithi kusakhanya ngoba ahamba njengamakhekhe ashisayo.
Lamathikithi atholakala kwaShoprite Checkers naseComputicket. Phela abalandeli nabathandi bebhola laseMzansi bazokhumbula ukuthi kuloMgqibelo esiya kuwona izinkunzi ezisasele kweNedbank Cup zizobe zinephuzana ukuze zizibeke ethubeni lokuqhubekela kweyamanqamu (finals). Amakilabhu asasele nekubhekeke ukuthi enze ezibukwayo ukufinyelela ezweni lesethembiso afana no Orlando Pirates, Baroka FC, SuperSport United kanye Free State Stars.
Yonke lemidlalo izodlalwa ngosuku olulodwa, ngaloMgqibelo wakusasa (May 14).
Ntambama ngoMgqibelo AmaBhakaBhaka azobe ehambele eFree State, enkundleni ebizwa ngeGoble Park lapho eyobhekana neFree State Stars.
Umdlali wePirates ozalwa ePort Shepstone u-Ayanda Gcaba nongomunye weziqonqwane emuva uthi lonke iqembu lakhe liyazi ukuthi iFree State Stars izodlalela ukufa nokuphila futhi angeke kube lula ukubhekana nayo ekhaya.
“Kozoba nzima kodwa thina sifuna ukuwina futhi siphethe isizini ngenkomishi. Sifuna ukuhlonipha abalandeli bethu kanye noSihlalo wethu u-Irvin Khoza ukuze phela kufane nomthoba nhliziyo kulesizini,”kusho uGcaba. Kulomdlalo iFree State Stars izobeka amathemba ayo ku-Andrea Fileccia osabahola phambili eqenjini lakhe ekushayeni amagoli (6). Omunye wezikhulu zaleliqembu uRantsi Mokoena uthi bona bathokozile ukuthi AmaBhakaBhaka azobe ebavakashele ngoba bazosingathwa kahle kwiPhulovinsi yaseFree State.
“Thina lapha eFree State sinobubele futhi asive nje siphathana kahle. IPirates nayo izozibonela, kodwa-ke la kuzobe kuhlangenwe ngeNedbank Cup.
Bafuna ukuwina kanti nathi angeke sibayeke bazenzele ngoba phela thina sesiphupha amafayineli alomqhudelwano. Kuzoba nzima kodwa sizobadla ngoba sizobe sidlalela ekhaya,”kusho uMokoena.Kanti ngosuku olufanayo ebusuku iSuperSport United izobhekana neBaroka FC eLucas Moripe Stadium.
Wonke uMzansi uyazi ukuthi leliqembu lalezifanyana iBaroka FC ihleze ithathwa njengofishi abancane abahlala bedla abakhulu. Nakulomdlalo iSuperSport United kungenzeka izithole isenkingeni.Iqiniso lithi akwaziwa ukuthi iyozala nkomoni, kodwa izazi zithi kungenzeka izifanyana zithole uswazi olungasukumi phansi bese womabili amaqembu akwiPSL azogcina ehlangene kumafayineli.